Nsonaazụ Tech Tech: Martech na-eme ezighi ezi nke ebumnuche ya | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Shafkat Islam
N'ụwa ebe e mere teknụzụ ka ọ bụrụ osooso ma nyefee ya ụzọ dị mma, teknụzụ azụmaahịa agafeela kemgbe ọtụtụ afọ, n'eziokwu, na-eme ihe dị iche.
N'ịbụ ndị nwere ọtụtụ nyiwe, ngwaọrụ, na ngwanrọ ịhọrọ site na ya, ọdịdị ahịa ahịa dị mgbagwoju anya na mgbagwoju anya karịa mgbe ọ bụla, na ngwugwu teknụzụ na-esiwanye ike karịa ụbọchị. Naanị ile anya ọzọ karịa Gartner's Magic Quadrants or Forrester's Wave na-akọ; ego nke teknụzụ dị na ndị ahịa taa enweghị njedebe. Ndị otu na - etinye oge ha n’ịrụ ọrụ, ego a na - aga n’ihu maka mkpọsa a na - eme ihe ndị na - adịchaghị mkpa na - na - arụkarị ọrụ.
Na a na-adịbeghị anya ọmụmụ, Sirkin Research nyochara ihe karịrị ndị na-ere ahịa 400 nke ọrụ dịgasị iche iche na nke okenye n'ịgbalị ịghọta ihe na-egbochi martech. Nnyocha ahụ jụrụ nanị:
Ihe ngwọta martech gị ugbu a bụ ihe na-enyere gị aka?
N'ụzọ dị ịtụnanya, naanị 24% nke ndị ahịa kwuru ee. Ndị nnyocha ahụ zaghachiri na-esonụ maka ihe kpatara ya:
68% kwuru na nchịkọta ha enweghị ike inyere ha aka itinye ego (ndị mmadụ na mmefu ego) na atụmatụ
53% kwuru na nchịkọta ha na-eme ka o sie ike ịhazi ahịa (mkpọsa, ọdịnaya, na ihe okike) n'ofe ìgwè, teknụzụ, na ọwa maka ịrụ ọrụ nke ọma.
48% kwuru na nchịkọta ha adịghị arụ ọrụ
Ma ọ na-enwe ezigbo mmetụta na-adịghị mma:
Naanị 24% na-ekwu na nchịkọta ha na-enyere aka ịme nkwado ma na-akọ banyere ịdị irè mkpọsa nke ọma
Naanị 23% na-ekwu na nchịkọta ha nwere ike ịkwanye mmekọrịta na ngwaọrụ
Naanị 34% na-ekwu na nchịkọta ha na-enyere ha aka ịmepụta, ịchịkwa, chekwaa na ịkekọrịta akụ ọdịnaya nke ọma
Yabụ, kedu ihe kpatara azịza azịza dị ugbu a na-anaghị egbo mkpa ndị otu azụmaahịa?
Nke bụ eziokwu bụ na e mepụtala ngwa ọrụ martech kemgbe dị ka isi ihe - ọ na - abụkarị ihe ahịa ahịa kachasị ọhụrụ ma ọ bụ "ọwa nke izu" - iji dozie nsogbu mgbu, ihe ịma aka, ma ọ bụ iji ikpe. Na oge na-aga, dị ka ngwá ọrụ ndị a ghọrọ, ha na kụrụ ọkpọ ndị ahịa na-ewepụta RFPs, na-enyocha ndị na-ere ahịa, na ịzụta ihe ngwọta otu otu. Ihe atụ:
Ndi otu anyi kwesiri imeputa ma biputa ọdịnaya - anyi kwesiri ikpo okwu ahia.
Ọ dị mma, ugbu a anyị rụgoro usoro okike anyị, ka anyị tinye ego na njikwa njikwa ngwa ahịa dijitalụ iji tinye ọdịnaya anyị maka ịkekọrịta ma jikwaa.
O bu ihe nwute, na ngwa nke ndu, ngwa oru ndi a na etinyecha ego ha nke oma, anabataghi ya, ma tinye ha iche. A zụrụ ngwá ọrụ pụrụ iche maka ndị otu ọkachamara. Ngwọta na-anọdụ ala na nzuzo, na-apụ na usoro dị ukwuu karị. Ngwunye ngwanrọ ọ bụla nwere admins nke ya, ndị mmeri, na ndị ọrụ ike, yana arụmọrụ dị iche iche emere maka ngwa ọrụ ahụ (yana naanị ngwaọrụ ahụ). Ha n’otu n’otu na-edebe usoro data nke ha.
Na ngwụcha, ihe dị iche iche bụ oke mgbagwoju anya na arụmọrụ arụmọrụ (ịghara ịkọwa oke dị na TCO nke ngwanrọ CFO / CMO gị). Na mpempe: Enweghi ike inweta ndi ahia ahia uzo di iche-iche nke na enyere ndi otu ha aka icho ahia.
Chestmegharị ahịa na-achọ ịkpụzi echiche ụlọ akwụkwọ ochie. Oge agafeela mgbe ndị isi azụmaahịa na ndị ọrụ ịre ahịa nwere ike ịmekọrịta ihe ọnụ wee kpee ekpere, n'ụzọ ụfọdụ, sistemụ ha niile ga-arụkọ ọrụ ọnụ. Emeela ụbọchị itinye ego na nyiwe ihe nketa lelee igbe naanị ka ndị otu ha ghara ịnakwere ma nweta uru site na ngwa ahụ.
Kama nke ahụ, ndị otu kwesịrị ile echiche zuru oke banyere ịre ahịa - gụnyere atụmatụ, mmezu, ọchịchị, nkesa na mmụba - ma chọpụta azịza nke na-enyere aka na njedebe ahụ na njedebe orchestration nke ahịa. Kedu ngwaọrụ ndị a na-eji? Olee otú ha si agwa ibe ha okwu? Hà na-enyere aka ịkwado ma mee ka ngosipụta nke ozi, ngwa ngwa nke usoro, njikwa nke ihe onwunwe, na tụọ data?
Idozi nsogbu ndị a ga-achọ ngbanwe mgbanwe na orchestration ahịa.
N'ime ihe ọmụmụ ahụ edepụtara n'elu, 89% nke ndị zaghachiri kwuru na martech ga-abụ onye nkwado dị egwu site na afọ 2025. Isi teknụzụ ndị edepụtara dị ka ndị nwere nnukwu mmetụta? Predictive Analytics, AI / Ngwa igwe, Dynamic Creative Optimization, na… Orchestration Ahịa.
Mana Gini bu ahia ahia?
N'adịghị ka njikwa njikwa ọrụ, njikwa ọrụ, njikwa njikwa akụ, yana azịza ndị ọzọ, usoro ịre ahịa maka ịre ahịa bụ ebum n'uche maka nsogbu - yana usoro - nke ụlọ ọrụ azụmaahịa. Lee otu ihe atụ:
Orchestration ahịa bụ usoro a na-aga n'ihu, nke na-amata akụkụ ọ bụla nke usoro kwesịrị ịrụ ọrụ.
Ọma, ahịa orchestration software na-aghọ home or sistemụ nrụọrụ (ntụgharị isi mmalite nke eziokwu) maka ndị otu azụmaahịa - ebe ọrụ niile na-eme. Dịkwa ka ọ dị mkpa, ọ na-eje ozi dị ka ihe jikọrọ anụ ahụ jikọrọ n'etiti teknụzụ azụmaahịa ndị na-adịghị iche, ndị otu azụmaahịa, na azụmaahịa na - arụ ọrụ - na-enyere ndị ọrụ aka aka ịgafe akụkụ niile nke atụmatụ mkpọsa, igbu, na mmesho
N'ihi na ndị otu ọchụnta ego nke oge a chọrọ teknụzụ ahịa ọgbara ọhụrụ. Sọftụwia na-eweta ihe kachasị mma na ngwa ọrụ ndị a niile n'otu usoro (ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, na-ejikọ ọnụ na usoro ntanetị) iji kọwaa usoro yana ịnyefe ọdịnaya na data maka ọhụhụ, nwekwuo njikwa , na mma nha.
Mmadụ Bịa ka Welcome
Nnabata si ahịa Orchestration Platform bụ ụlọ nke modulu nke oge a, agbakọta, na ebumnuche wuru iji nyere aka ịhazi ahịa. Ọ na-enye visibiliti nke iji atụmatụ eme atụmatụ ma hazie akụrụngwa, ngwaọrụ iji rụkọta ọrụ ma nweta ọrụ n'ọnụ ụzọ ọsọ ọsọ, ọchịchị iji jigide njikwa n'ofe ahịa ahịa niile, yana nghọta iji tụọ ọrụ gị.
Ma n'ezie, ọ bụ ihe siri ike API na ahịa mwekota siri ike gụnyere ọtụtụ narị njikọta enweghị koodu - na-echebara echiche iji nye njikọta dị iche iche maka usoro azụmaahịa ọ bụla.
Maka dị ka onye nduzi chọrọ okpiri iji chie ọtụtụ ndị egwu na-akpọ ngwa dị iche iche, ndị ahịa ahịa ahịa chọrọ ọhụhụ ma chịkwaa ngwaọrụ ha niile maka ịhazi ahịa.
Mụtakwuo Banyere Nnabata Rịọ Mmasị Nnabata
Shafqat Islam bụ cofounder na CEO nke Welcome, a NewsCred ika.